Bilaogera Saodiana Naneho Hevitra Mikasika Ny Fisamborana Ilay Mpanoratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Septambra 2017 16:17 GMT
(Marihina fa tamin'ny 15 Martsa 2006 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Araka ireo bilaogy sy fifanakalozan-kevitra Saodiana maro, nosamborin'ny manampahefana Saodiana ilay manam-pahaizana Islamika Dr. Mohsen Al-Awaji, taorian'ny famoahany lahatsoratra tao amin'ny tranonkala, izay nanakianany an'i Ghazi Al-Gosaibi, minisitry ny asa. Tao amin'ny lahatsorany, niampanga an'i Al-Gosaibi ho nitarika vondrona iray izay mikasa ny hanova ny mari-panondroana ny fiarahamonina Saodiana i Al-Awaji. Niampanga an'i Al-Gosaibi ho nanoratra ny teny fanolorana an'ilay boky tantara nampiady hevitra mitondra ny lohateny hoe Banat Al-Riyadh ihany koa i Al-Awaji.
Tsy namoaka fanambarana mikasika ity fisamborana ity ny governemanta, kanefa hita voamarina taorian'ny fisamborana fa nosakanana ny tranonkala sasany izay namoaka ilay lahatsoratra. Anisan'ireo tranonkala voasakana vao haingana ny sehatra fifanakalozan-kevitra Al-Wasatia , izay an'i Al-Awaji manokana, ny gazety elektronika Al-Wifaq, ary ny sehatra fifanakalozan-kevitra malaza ratsy Al-Sahat .
Tsy nitatitra momba ity tantara ity mihitsy ny gazety tao an-toerana, saingy nanoratra momba izany ny bilaogera Saodiana sasany. Nilaza i Fouad Al-Farhan fa tena sahiran-tsaina izy (Arabo) rehefa nandre ny vaovao fisamborana an'i Al-Awaji, sy ny fanakanana ireo tranonkala ihany koa. “Tsy niombon-kevitra tamin'i Dr. Mohsen aho tamin'ny fivoriana maromaro sy tato amin'ity bilaogy ity, saingy tsy manaiky ny fisamborana na iza na iza aho noho ny heviny ,” hoy izy. Mihevitra i Al-Farhan fa minisitra ratsy i Al-Gosaibi satria tsy nahita vahaolana azo ampiharina amin'ny krizin'ny tsy fananan'asa izy, nanampy izy fa izay nolazain'i Dr. Mohsen tao amin'ny lahatsorany dia tsy ny heviny fotsiny ihany, fa ny hevitry ny olona maro ao amin'ny governemanta sy ny fiarahamonina ihany koa. “Noho izany, mendrika hosamborina avokoa ve isika rehetra?” hoy izy nanontany.
Etsy andanin'izany, mihevitra i Riyadhawi fa minisitra azo itokisana (Arabo) i Al-Gosaibi. “Misy ny fahasamihafana eo amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny famelezana olona manokana. Toa tsy nahita io fahasamihafana io anefa ny Dr. Al-Awaji, ary nampiasa ity farany teo amin'ny toeran'ilay voalohany, saingy tsy nampoiziny fa hivoatra toy izany izy ity,” hoy izy nanoratra.